Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday cida ka masuulka ah guuldaradii lama filaanka ahayd ee shalay ka soo gaadhay kooxda Burnley taas oo soo afjartay rikoodhkii guuldaro la’aanta Anfield.
Burnley ayaa sidoo kale lagu xasuustaa inay aheyd kooxda kaliya ee xilli ciyaareedkii hore ku badisay Anfield, madaama ay barbaro 1-1 ah la galeen Reds.
Xalay, mar kale ku sharax Anfield ka dib markii Clarets ay gool xilli dambe ah ka heshay weeraryahan Ashley Barnes qalad uu ku galay goolhaye Alisson Becker si uu u soo gabagabeeyo 68 kulan oo isku xigta oo aan looga badinin Anfield looga.
Guuldarradan ayaa ah tii ugu horreysay ee Liverpool soo gaarta tan iyo bishii Abriil 2017 ee Anfield, waana markii ugu horreysay ee aysan wax gool ah dhalinin afar kulan oo xiriir ah muddo 21 sano ah.
Dhibaatada ugu weyn ee heysata Liverpool ayaa ah in kooxda Klopp aysan wax gool ah dhalin todobo saacadood iyo 18 daqiiqo oo horyaalka ah.
Ciyaarta ka dib, tababare Jurgen Klopp ayaa u sheegay suxufiyiinta inuu qaadi doono masuuliyada guuldarada sababtoo ah waxay ahayd shaqadiisa inuu abaabulo xiddigihiisa.
Klopp oo la hadlaya Sky Sport ayaa yidhi: “Kulankani waxa uu ahaa mid aan macquul ahayn in nalaga badiyo, laakiin waan guuldareysanay.
Waa qaladkeyga maxaa yeelay waa shaqadeyda inaan hubiyo in wiilashu ay ku jiraan jawiga saxda ah, inay haystaan ​​xaddiga kalsoonida saxda ah ayna gaaraan go’aamada saxda ah. “